बिपि राजमार्गको रिठ्ठेभिरमा किन टाँसियो १००० बढी ऐना ? - PUBLICAAWAJ
बिपि राजमार्गको रिठ्ठेभिरमा किन टाँसियो १००० बढी ऐना ?
प्रकाशित : मङ्गलबार, बैशाख ३१, २०७६११:४५ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
सिन्धुली। बनेपा–सिन्धुली–बर्दीवास (बीपी) राजमार्गमा दैनिक पाँच हजार बढी ठूलासाना सवारी साधन आवतजावत गर्दछन्। नियमित रुपमा आवतजावत गर्ने सावरी साधनमात्र हैन यस राजमार्गमा नेपालको पूर्वी जिल्लाबाट राजधानी र राजधानीबाट पूर्वी जिल्लासम्म घुम्न निस्कनेहरूका सवारीको पनि उत्तिकै चाप हुन्छ।अन्नपुर्ण पोस्टमा राजन गाउँलेले लेखेका छन् । बीपी राजमार्ग अन्तर्गत रिठ्ठेभिरमा पुग्ने पुराना तथा नयाँ चालक र यात्रुका लागि भने एउटा आश्चर्य लाग्दो दृष्यले एकछिन रोक्किन बाध्य पुर्‍याउँछ। सडकको भित्ता खोपेर बनाइएको एउटा सानो सेतिदेविको मन्दिर र त्यसको वरीपरी भित्तै भरी झुण्डाइएका हजार बढी ऐना। जहाँ एक हजारबढी ऐनैऐनाका बीचमा सेतिदेवी माइको स्थापना गरिएको छ।
तपाइलाइ अच्म्म लाग्नन सक्छ एस्तो किन भने र दैवी शक्तिमाथिको आस्था र सुरक्षित यात्राको मनोभावनासँग जोडिएको यो ठाउँ सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका ५ मुलकोट नजिकै छ,। यो ठाउँ हो जहाँ २०६८ वैशाख २० गते एउटा यात्रुबस रिट्ठे भिरबाट सुनकोसीमा खस्दा १४ जनाको घटनास्थलमै ज्यान गुमाएका थिए ।रिठ्ठेभिरमा ऐनैऐनाको बीचमा सेतीदेवीको मन्दिर स्थापना गर्नुको कारण आश्चर्य र डरलाग्दो भएको स्थानीय बताउँछन।
तेस घट्ना पछि उक्त ठाउँ असोज २६ मा सिन्धुलीबाट काठमाडौं जाँदै गरेको यात्रुबस सुनकोसीमा खस्दा ४२ जनाले घटनास्थलमै ज्यान गएको थियो। र तेसको ६ बर्स पछि पनि २०७४ असोज २६ मा, पुन दुर्घटनामा परि ६ जनाको ज्यान गएको थियो। २०७० भदौ ३१ मा पनि रिट्ठेभिरमै भएको जिप दुर्घटनामा तीनजनाले ज्यान गुमाएका थिए। त्यसयता उक्त ठाउँमा मात्र भएका सवारी दुर्घ टनामा एक दर्जनबढीको ज्यान गइसकेको छ। पहिलो पटक सडक दुर्घटना देखेर त्रसित स्थानीयहरू त्यसयता पटक पटक हुने दुर्घटनाबाट थप भयभीत भएको सेतिदेवी मन्दिरका पुजारी नीरप्रसाद आचार्य सुनाउँछन्।
‘दुर्घटनाका मृतकका आफन्तसहित लगाइएको पुराणमा एक महिलाले काम्दै सुनकोसीको एउटा ढुङ्गा टिपेर देखाउँदै म सेतिदेवी हुँ, मेरो बासस्थानमा सडक निर्माण गर्दा क्षति पुर्‍याए पछि मैले मान्छेको भोग खान थालेको हुँ’, आचार्य त्यो घटना सम्झन्छन्,’मलाई सडकमै मन्दिर बनाएर बस्न दिएमात्रै राम्रो गर्छु। नत्र थप क्षति गर्छु।’ यो घटनापछि जापान सरकारले नै सडकको भित्तो खोपेर मन्दिर बनाइदिएपछि ऐना चढाउने र पूजा गर्न थालिएको उनी सम्झभन्छन्। ती महिलाको भनाई र रिठ्ठेभिरमा सडक निर्माण गर्दा एक्साभेटर पल्टिने, बिग्रिनेजस्ता अनपेक्षित घटना हुने गरेपछि सडक निर्माण गर्दै आएको जापानिज। कम्पनी हाज्माका प्राविधिकहरूको टोलीले सेतीदेवीलाई बोका बलि दिएपछि भने त्यस्ता घटना दोहोरिन छाडेको सेतिदेवी मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मनोज श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘यस्ता डरलाग्दा घटनाले अचम्मित बनाएपछि यहाँ सबैको पहलमा सेतिदेवीको मन्दिर स्थापना गरिएको हो,’ श्रेष्ठले भने।
ठूलाे आँधीका कारण आकस्मिक विमान अवतरण यात्रु र चालक सहित १४ जना घाइते